चीनमा देखियो नयाँ भाइरस, मानिसका लागि कति खतरनाक ?
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी रहेको छ । यसैबीच चीनमा नयाँ भाइरस फेला परेको बताइएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार चीनमा भेटिएको नयाँ भाइरस फैलिने सम्भावना झन् बढी रहेको छ ।
क्लुको वर्तमान भ्याक्सिन यो भाइरसविरुद्ध मानव शरिरको रक्षा गर्न सक्षम नरहेको बताइएको छ । सुँगुरमा देखिएको यो भाइरस मानवलाई संक्रमित बनाउन उत्तिकै क्षमता राख्ने मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
के हो यो भाइरसको नाम ?
यो भाइरसलाई जिएफो इए एचवानएनवान नाम दिइएको छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यो भाइरस म्युटेड हुने झन् खतरा रहेको छ ।
विश्वभर यो भाइरस फैलिएमा अर्को ठुलो दुर्घटना हुनसक्ने उनीहरुको अनुमान रहेको छ ।
त्यस्तै त विश्व कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ ।
कति खतरनाक छ यो भाइरस
यो भाइरसले पुरै विश्वमा महामारीको खतरा ल्याउन सक्छ । यो फ्लु भाइरसमा सबै लक्षण रहेको बैज्ञानिकहरु बताउँछन् । यो भाइरसलाई निकै गहिरोका साथ अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
यो भाइरस नयाँ भएका कारण मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर वा नभएको पनि हुनसक्छ ।
किन विश्वमा अर्को महामारीको खतरा छ
पछिल्लो समय देखिएका भाइरसको प्रकोप विश्वभर देखिन थालेको छ । स्वाइन फ्लु होस् वा कोरोना भाइरस । यसले विश्वभर महामारीको रुप लिएको छ । नयाँ भाइरस पनि उस्तै प्रकृतिको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी रहेको छ ।
यस अवस्थामा नयाँ भाइरस फैलिएमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उनीहरुको दाबी छ ।